ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားနေတဲ့ messenger for buddhist ဘလော့ဂ်အပေါ် ကျနော်မြင်တာက ဒါ…။ လုပ်သင့်တာက ဒီအရာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားနေတဲ့ messenger for buddhist ဘလော့ဂ်အပေါ် ကျနော်မြင်တာက ဒါ…။ လုပ်သင့်တာက ဒီအရာ…
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားနေတဲ့ messenger for buddhist ဘလော့ဂ်အပေါ် ကျနော်မြင်တာက ဒါ…။ လုပ်သင့်တာက ဒီအရာ…
Posted by True Faith on Jul 29, 2010 in Buddhism | 12 comments
ကျနော်မြင်တာက...ဒါ။ လုပ်သင့်တာက ဒီအရာ...။
ကျနော် http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ ဆိုတဲ့ဆိုဒ်ကို တွေ့နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကတည်းကပါ။ စာတွေကို ဖတ်ကြည့်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် အတော့်ကို ယုတ်မာရိုင်းစိုင်း အောက်တန်းကျစွာ ရေးသားထားတာပါ။ မြန်မာစာသားနဲ့ ဒီလိုမျိုး ဖတ်ရလိမ့်မယ်၊ တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ရှိလိမ့်မယ်လို့ တခါမှ မတွေးမိဘူး။
ရေးထားတာတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတွေကို လျှောက်ဖတ်ပြီး ထင်ရာမြင်ရာတွေကို ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းနဲ့ ရေးထားတာပါ။ အကြောင်းအရာတွေက ခါးအောက်ပိုင်းကကို တက်မလာပါဘူး။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကလော်တုတ်ထားတာတွေတောင်ပါနေတော့ ကျနော်သူ့အစား ကြက်သီးမွေးညင်း ထမိတယ်။ အော် ငရဲကလူ၊ ပြာပူမကြောက်ဆိုတာ ဒီလူမျိုး ထင်ပါ့လို့လည်း စိတ်ထဲက သတ်မှတ်လိုက်မိပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ဗုဒ္ဓသာဘာ ပြန့်ပွားရေးအသင်းက ဆရာတော်တပါးကို အရှင်ဘုရား ဒီဆိုဒ်အကြောင်း သိပါသလားလို့ မေးကြည့်တော့ သူသိပါတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့် ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားသလဲလို့ မေးတော့ ရှင်ဘုရင်ဟာ သူတောင်းစားနဲ့ ဖက်ရန်ဖြစ်ရင် သူနဲ့ အဆင့်အတန်းခြင်း တူနေလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အခုလည်း ဒီလို အဆင့်အတန်းမရှိ၊ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့လူမျိုးကို သူပြောတာ မဟုတ်ကြောင်း အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောပြ၊ တရားနည်းလမ်းကျစွာ ခုခံချေပရင်လည်း ဟိုဖက်က ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပဲ တုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းနေနေတာပါလို့ ဖြေပါတယ်။
ဆရာတော်ပြောတာ သင့်တော်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်လို့များ မိတ်ဆွေက သူတို့ဆိုဒ်ရဲ့ ကွန်မန့်ဘောက်စ်မှာ ဒေါသနဲ့ တခုခု ရေးကြည့်လိုက်ပါ။ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဒီလိုပဲ ရိုင်းစိုင်းသလား။ မင်းတို့ ဘုရားကိုက ဘာဖြစ် ညာဖြစ်နေတော့လည်း မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး ဘာညာဆိုပြီး တုန့်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ ဆရာတော်က ဆက်မိန့်တာက ဒါဟာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတခုကို ဦးတည်စေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နောက်ခံ ရှိမယ်ထင်မိတယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။ အင်း ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ လို့ တွေးမိပြန်ပါတယ်။ တော်ရုံ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ ဘယ်သူကမှ လက်ညောင်းခံ၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကျမ်းစာတွေလေ့လာ၊ ယုတ်ယုတ်မာမာ ရေးနိုင်အောင် အားထုတ်ပါ့မလဲ။ အင်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က ဘုရားဒကာ သူတော်ကောင်းကြီးတွေများ ပါဝင် ပက်သက်နေမလား။ ဒါလည်း စဉ်းစားစရာတခုပါပဲ။
ထူးခြားတာတခုကတော့ သူတို့ အလိုမရှိတဲ့ဆိုဒ်တွေ ဘလော့ဂ်တွေကို ပြည်တွင်းကနေ ကြည့်လို့မရအောင် ဘန်းထားပေမယ့် ဒီဆိုဒ်ကတော့ ပြည်တွင်းကနေ အလွယ်တကူပဲ ၀င်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာတော်က ဘာပြောသလဲဆိုတော့ “သူတို့ မလိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ အကုန်ဘန်းထားတယ်။ ကျော်ခွမှ ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကိုတော့ မဘန်းဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ ဒါမျိုးဆိုဒ်ကို ဘန်းသင့်တယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ကို မလိုဘူး။ အဲဒါကို မဘန်းဘဲ လွှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ဆက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့”လို့ မိန့်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ စတဲ့ အန္တနော အန္တနငါးပါးကို ပြစ်မှားရင် ဘယ်လောက် အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဘာသာဝင်တိုင်း သိပါတယ်။ အဲ ဘာသာဝင် မဟုတ်သော်လည်း ဒါတွေကို မသိဘဲ စော်ကားလာရင်တော့ အပြစ်က သိသူ၊ မသိသူကို ခွဲခြားမှာ မဟုတ်ပါ။
သေချာတာတခုကတော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ပမာဏအတိုင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ အရပ်သားစကားနဲ့ ပြောရရင် သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူ သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့က သူ့ဆိုဒ်ကိုသွား၊ သူရေးတာကို ဖတ်ပြီး အလကားဒေါသတွေ ထွက်တာမျိုး သူ့အကုသိုလ်တွေကို ကိုယ်က ဖဲ့ယူတာမျိုး မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။
သူဘယ်လို ပြောသည်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သူပြောသလို ယုတ်ညံ့နိမ့်ကျသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို အကြွင်းမဲ့လက်ခံပါတယ်။ သည်းခံခြင်းဟာ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ နားလည်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ မြန်မာများကို ပြောလိုတာက“ခြေမ မကောင်းရင်၊ ခြေမ၊ လက်မ မကောင်းရင် လက်မ”ဆိုတဲ့ မြန်မာ စကားပုံရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းပင် ဖြစ်သော်လည်း မကောင်းရင်၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နေရင် စွန့်ပစ်ရမှာပါ။
အခုက ခြေမ၊ လက်မလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ၀က်ဆိုဒ်တခုပါ။ ၀က်ဆိုဒ်တောင်မှ တမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်နေသူတွေကိုရော မြင့်မြတ်လှတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုပါ သိမ်းကျုံးပြီး စော်ကားနေတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ပါ။ အဲတော့ ဒီလိုဆိုဒ်မျိုးကို နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ မြန်မာများက အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ပပျောက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါဟာ သူများလုပ်ထားတဲ့အရာတခုကို ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်တာ မှန်ပေမယ့် မကောင်းတဲ့၊ အများသူငါ ဖတ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့၊ အကုသိုလ်တရား တိုးပွားစေတဲ့ အရာတခုကို အင်တာနက် ကွန်ယက်ထဲကနေ ရှင်းထုတ်လိုက်တာပါ။ ဒါဟာ လုပ်သင့်တယ်လို့လည်း မြင်သလို လုပ်အပ်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော့်ရဲ့ အမြင်နဲ့ အထင်ပါ။
မိတ်ဆွေရော … ဘယ်လို အမြင်ရှိလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်တယ် ထင်မိလဲ။
သူပေးတာကို လက်မခံရင် သူပေးသမျှသူ့ဆီပြန်ရောက်သွားမှာပါ။
ဘာမှ အရာမရောက်သူက မတော်တရော်ပြောနေတာကို အသိအမှတ်ပြုစရာမလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အကိုတစ်ခါမှ ၀င်မကြည့်ပါ၊
အကိုတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားသည် သူများကိုတိုက်ခိုက်သော ဘာသာမဟုတ်ပါ။
ဒီလိုပြောရုံလောက်လေးနဲ့ အကိုတို့ဘာသာတရားက ဘာမှဖြစ်မသွားပါ။
First of all, I’m really appreciate this website is relay grate. I have learn lot of things and got lot of knowledge. According to this article I have read both of the web and blog then I compare and analyzed them. As my opinion some of the facts from the http://www.messagerforbuddhsit.blogspot.com are true and its happening in reality in the society. As we all know in Burma the religions like christian, Islam and Hindu except Buddhist are oppressed not only by the Military regime but also by the majority Buddhist people . I have lot of experience concern with this event especially in the countryside in ethnic area. For example Kachin christian people in Kachin state and Northern Shan state, they try to build the churches but the government didn’t allow to build it but for Buddhist pagoda or monastery they allow to build in any where in any times.
And also i checked in this maadalaygazette.com and i saw in the religion section, about christian religion they just mention the news about sex abuses or bad images for christian but in Buddhist section they post about the messages or sermon by famous Monks or just about good thing for the Buddhist. I thinks its not fair and very bias for the religions.
So, i would like to suggest that should be fair, don’t be feel pain for the truth. Remind yourself to accept the truth….every one has the right to believe and foredoom of expression. Don’t forget that every people have different ideas and opinions,don’t just think to be the same with you.
I know that my comment will not be posted since you don’t agree with my ideas, but if you like to post it will be so grate for me…you can edit my poor English…. Thanks so mush for your Information.
အင်း……. ကျနော်လည်း အဲဆိုဒ်ကို…တစ်ခေါက်ဝင်ကြည့်ဖူးတယ်ဗျ…
ကျနော်တို့လည်း….သူများဘာသာကိုစော်ကားဖို့အတွက်တော့ ဒီလို ဆိုဒ်တစ်ခုအပင်ပန်းခံလုပ်ပီး….မစော်ကားပါဘူးဗျာ…ပီးတော့ သူပြောထားတာတွေကလည်း တစ်လွဲတွေချည်းပဲ…
ဘယ်လိုကဘယ်လို…စိတ်ရူးပေါက်ပီး လုပ်လည်း စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူး…..ဆိုးပါတယ်ဗျာ….
I normally don’t want to write about religion, even though I amastrong Buddhist.
But after reading your comment, I think I need to explain some facts.
In every country or religion, sure, there are uneducated person & unfair persons.
But we cannot decide this religion rely on the behaviour of this unfair & uneducated persons alone.
I swear I understand some sort of your feelings & have sympathy upon this.
1st of all, I don’t like this website “http://www.messagerforbuddhsit.blogspot.com” .
But, I accept that “every body have the right of expression”.
So, I know I have no right to attack this site nor encourage others to attack this site.
Moreover, I agree the said of Sayadaw in above Article.
( You can see he didn’t threaten this web site, please appreciate this Sayadaw )
2nd, I agree that Christian & Muslim minority were oppressed in Myanmar in so many ways.
I also feel sad for them even I am Buddhist & I understand their painfulness.
But this was because of Regime / Dictatorship’s divide & rule tactics &
please don’t consider it was because of true Buddhist.
( You can notice this Regime self killed the monks in Saffron Revolution )
On the other hand, Dear My Buddhist fellows,
Now, you can see how the Christian gentleman were felt,
then, please don’t applause the unfair practices to those suffering minority religions.
It will really deteriorate the true image of Buddhism.
3rd, Concerning religious section in myanmargazette.net
Buddhist has the right to express what they want to & other Christian & etc have either.
I don’t think & I trust that Admin will not block any Articles or comments
except offences to others person or religion,
except vast amount ( using like propaganda ),
except untrue & unjust manner or practice.
For example, you see your comment was not deleted &
moreover, I noticed one person continuously wrote the crimes of Buddhist Monks about one month ago
& this really like threatening to all Buddhists, but they don’t delete those & show their tolerance.
I just write this comment
no intention to attack other religions,
but only to defend the politeness & calmness of Buddhist.
စစတွေ့ခြင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း ခံပြင်းဒေါသထွက်မိတယ်။
နောက်တော့ သူရေးတဲ့စာတွေ သေချာဖတ်မိတယ်။
သူက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖဲ့နေတာလေ။
မသိမနားလည်လို့ မေးတာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ပြီး အဆင့်ရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုး၊ပညာသားပါတဲ့မေးခွန်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
တမင်သက်သက် ဆီလိုအပြစ်လိုက်ရှာပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းများသာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် သူ့မေးခွန်းတွေဟာ ဖြေဆိုဖို့ မလိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းတွေလို့ ယူဆတယ်။
ဖြေဆိုလည်း အမှန်ကို အမှန်လို့ လက်မခံတဲ့သူလေ။
ဒီလိုလူမျိုးက ပစ္စပုန်ဘ၀မှာတင် လက်ငင်းအကုသိုလ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မုချယုံကြည်ထားပါတယ်။
ဒီတော့ သူ့ကို ဥပက္ခာပြုထားပါတယ်။
မလောက်လေးမလောက်စားကောင်နဲ့ ယှဉ်ပြောရတာ ကိုယ်ပဲ သနပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုစော်ကားတယ်ဆိုတော့မဖတ်ရသေးပေမယ့်ကြားတာနဲ နဲ့ ကိုဒေါသဖြစ်ပါတယ်….ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်
I wanted ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံစာအုပ် please how can i get please
အဲဒီ ဆိုက်ကို ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး တခါတော့ ဖတ်ဘူးတယ် စစဖတ်ခြင်းမှာ တော်တော် ဒေါပွပေမဲ့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရေးတဲ့ လူကို သနားလာတယ် ခိုင်မာ စွာရပ်တည်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဒီလိုနည်းနဲ့ လှဲဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး စာတွေကလည်း အကြောင်းအရာ ခိုင်ခံ့မှု မရှိဘူး သူပြောချင်တာကို စွပ်ပြောပြီး မဟုတ်တာတွေချဲ့ကားရေးနေတာဘဲ။ ကျောက်ကွင်း စာအုပ်ကတော့ မေးတွေထဲမှာတောင် တခါတလေ ရောက်လာတတ်သေးတယ် ကိုချစ်စရာ နောက်တခါကြုံရင် ဒီမှာ တင်ပေးမယ်
thank u very much n please don’t forget please.